Read How we help brochure - Somali
Read How we help brochure - Somali text version
How we help SOMALI
Sidaan wax u caawino
TUSAHA ADEEGYADA DoCS
Wasaaradda Adeegyada Bulshada ee NSW (DoCS) waa ururka ugu horeeya adeegyada bulshada NSW iyo wakaalada ugu balaaran ee ilaalinta carruurta Australia. Buuggan yari wuxuu sharxayaa siyaalaha badan ee aan wax u caawino.
CAAWIMTA SI CARRUURTA AMMAANKOODA LOO SUGO IYO QOSASKA OO WADA JIRA
Shaqadeena ugu muhiimsan waxaa weeye in carruurta ammaankooda la sugo, ilaalintooda iyo wanaagooda.
Sannad kasta, kumanaan carruur ah ayaa waxaa na soo ogeysiiya saaxiibo, qoys iyo dad xirfadlayaal ah inay ku jiraan khatar waxyeelo u geysaneysa oo ah dayacaad ama waxyeeleyn. Warbixinadaan waan qiimeynaa haddii loo baahdana waan baarnaa oo aan la shaqeynaa qoysaska si aan u hubino in carruurta iyo dhalinyaraduba ay ammaan qabaan. Waxaan sidoo kale la shaqeynaa wakaaladaha kale, oo isugu jira labadaba kuwo dawladeed iyo kuwa gaar ahba, si aan u hubino in carruurta iyo qoysaskuba ay helaan taageerada ay u baahan yihiin. Waxaan ka shaqeynaa sidii aan uga hortegi laheyn ama aan u xalin lahayn inay kala go'aan dhalinyarada iyo waalidkood. Shaqo la'aanta, rabshada qoyska, aalkolada ama daroogo ku tiirsanaanta, jirro maskaxeed ama jireed ama dhibka koritaanka carruurta waa qaar ka mid ah arimaha dhibaatooyin ka dhalin kara qoyska dhexdiisa. Ka hortagayaga iyo barnaamijyada hore u dhexgelida, waxaan la shaqeynaa qoysaska si aan isugu deyno inaan xal u helno dhibaatooyinka anagoo si toos ah ula hadleyna carruurta iyo waalidkood. Haddii ay suurto gal tahay waxaan jecelnahay inaan ka qaybgelino wallaalaha gabdho iyo wiilalba, ayeeyooyinka/awoowayaasha iyo xubnaha kale ee qoyska. Ahmiyadeenu waxaa weeye inaan caawino sidii ay qoysasku uwada joogi lahaayeen. Haddii qof dhalinyara ahi uusan ku noqon Karin guriga sababtuna ay tahay ammaan darro, waxaan u sameyn karnaa meel ay joogaan ­ iyo xannaaneeye masuul ka noqda ama hoy la kormeero sida hoyga dhalinyarada. Haddii aad u maleynayso qof aad taqaan- xitaa ilmahaaga ­ inuu khatar ugu jiro waxyeelo si uun, fadlan wac Khadka Taleefanka ee DoCS Dadka dhalinyarada ah ee u baahan macluumaadka iyo tallada waxay la xiriiri karaan Khadka Caawimaada Carruurta, waalidiinta u baahan taageeradana waxay wici karaan Khadka Taleefanka Waalidka. Cid kasta oo ay haysato rabshada gurigu waa soo weci kartaa Khadka Taleefanka Rabshada Guriga ee DoCS Lambaradan waxaa la soo garaaci kartaa bilaash wakhti kasta, meel kasta oo ka mid ah gobolka.
Khadka Taleefanka Caawimaada DoCS 132 111 TTY* 9633 7698 Khadka Taleefanka Caawimaada Carruurta 1800 551 800 Khadka Waalidka 1300 1300 (Centacare) 132 055 52 Khadka Taleefanka Rabshada Guriga 1800 656 463 TTY* 1800 671 442
* TTY waa tasiilaad caawinaya dadka maqalkoodu dhimman yahay.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ogaato wax badan oo ku saabsan adeegyada DoCS ee goobta aad degan tahay, fadlan la xiriir Xarunta Adeegyada Bulshada DoCS ee kuugu dhow (CSC). Waxaan leenahay wax ka badan 80 CSCs NSW oo dhan, oo badanaa ku yaal ama u dhow xarumaha magaalada ama xarumaha dukaamada xaafadaha.
SIINTA XANNAANO CARRUURTA AAN LA NOOLAAN KARIN WAALIDKOOD
Xannaano guriga ka baxsan ayaa ah ta ugu muhiimsan ee aan carruurta ku xannaaneyno aan waalidkood la noolaan Karin.
Xannaanada ayaan bixinaa anagoo la wadaageyna lamaanayaashayada bulshada. Tan waxaa ka mid ah wakaalada sida Centacare, Burnside and Barnardos. Xannaanada guriga ka baxsan waxay siisaa ammaan, nabadgelyo and nolol qoys oo raaxo leh carruurta siyaalo kala duwan aan ula noolaan Karin waalidkood. Xannaanadan waxaa ku mid ah ku meeleynta xubno kale oo qoyska ka mid ah ama qaraabooyin kale. (bulshooyinka Aborjuniiska waxaa loogu yeeraa tan `xannaanada qaraabada'), xannaanada dad kale ama xannaanada degaaneed. Ujeedadayadu waxaa weeye in carruurta dib loogu soo celiyo qoyskooda meel alaale meeshii suurto gal ah, saa daraadeed , xannaanada guriga ka baxsan badideeda waa wakhti gaaban oo keliya. Haddii aysan tani suurto gal ahayn, waxaan u raadinaa qoys uu wakhti dheer la noolaan karo ilmuhu ama qofkan yari oo uu ku dhex karo. Had iyo jeer waxaan u baahan nahay xannaaneeyayaal badan. Xannaaneeyayaashu waxay ka ciyaaraan door aad iyo aad u muhiim u ah xagga taageerida xiriirka ilmo kasta iyo qoysiiskiisa. Haddii aad jeclaan lahayd inaad noqoto xannaaneeye, ama aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ilmo heynta, fadlan la xiriir Xarunta Adeegyada Bulshada DoCS ee kuugu dhow Waxaad ka helysaa lambarada lagala xiriiro xafiis kasta oo ay leedahay DoCS boggaga 5-6 ee buuggan yar.
CAAWINTA DADKA AY KALA LUMEEN WAALIDKOOD INAY HELAAN DIIWAANKOODA
Waxaan caawinaa dadka aanu xannaaneyn jirney ama aan soo koriney inay helaan macluumaad iyo diiwaan.
Degmooyinkii hore ee gobolka, ama dadka hoos umanayey masuul waalidnimo Wasiirka Adeegyada Bulshada, ayaa xaq u leh inay arkaan waxyaalaha ku saabsan diiwaanka Wasaarada. Sababta loo xaaneynayey iyo wakhtigii la xannaaneynayey. Tani waa adeeg bilaash ah. Shaqaalaha Xarunta Adeegyada Bulshada ee DoCS ayaa kuu heli kara diiwaanka. Haddii aad degan tahay meel ka baxsan NSW fadlan wac Unuga Horiyada Macluumaadka 9716 2662. Dadka la soo korsadey iyo qaraabadooda dhashay waxay heli karaan macluumaad ku saabsan soo korsiga haddii ay xaq u leeyihiin marka loo eego sharciya Sookorsiga ee ee 2000. si aad u ogaato inaad xaq u Unuga Xoryada Macluumad leedahay iyo in kale si aad u aragto macluumaadkan la xiriir Adeega Macluumaadka Qoyska 9716 2662 ee Laanta Soo korsiga iyo Adeegyada Xaannaanada Joogtada ah 9716 3002 8855 4900.
BIXINTA IYO SHARCIYEYNTA ADEEGYADA SOO KORSIGA
Waxaan iskuxirnaa sookorsiga carruurta ee NSW ­ ee carruurta Australiyanka ah iyo kuwa dibeda ku dhashay, annagoo u heleyna qoysas ku haboon oo lagu meeleeyo iyo siinta taageero meeleyntaas.
Sookorsiga waxaa sameeya DoCS iyo wakaalado soo korsi oo la sharciyey sida Barnardos, Centacare iyo Anglicare. Waxaa laga dhigey kuwo uu qabanayo sharciga Maxkamada Sare ee NSW. DoCS waxay sameysaa soo korsiga carruurta dibeda ka yimid Macluumaad faahfaahsan waxaa laga helayaa website keena ah www.community.nsw.gov.au/adoption. hoostiisa. soo korsiga
Soo korsiga iyo Adeegyada Xannaanada Joogtada 8855 4900 ama wecitaan 9716 3002 bilaash ah 1800 049 956
DHISIDA IYO HORUMARINTA BULSHOOYINKA
Waxaan leenahay barnaamijyo badan si loo dhiso loona xoojiyo bulshooyinka.
Qoysaska marka hore ­ waa istaraatijiyad dhan oo ay dawladu ku caawineyso waalidka iyo xannaaneeyayaasha inay siiyaan carruurtooda bilow wanaagsan oo nololeed. DoCS waxay maalgelisaa adeegyo badan oo taageero oo ay ku jiraan booqashada guriga oo iskaaga ah iyo playgroups-ka . Caafimaadka NSW wuxuu maalgeliyaa booqashooyinka guud ee guriga oo ay booqanayaan kalkaaliyayaasha carruurnimada hore iyo Wasaarada Waxbarashada iyo Tababarada waxay ku lug leedahay www.families.nsw.gov.au barnaamijyada u kala wareega dugsiyada. Gal www.familiesfirst.nsw.gov.au wixii macluumaad ah ee dheeraad ah. Mustaqbalo wanaagsan ­ waxay ujeedadeedu tahay in dhalinyarada jirta 9-18 lagu xiro waxbarashada, bulshooyinkooda iyo qoysaskooda. Waa istaraatijiyad dawladeed oo lagu taageerayo u wareegida qof weynimo oocaafimaad iyo ammaanba leh. Ilmaha Aborjoniiska ka ah, Istaraatijiyada Qoyska iyo Dhalinyarada ­ waxay siisaa barnaamijyo badan oo taageero carruurta Aborjoniinska ah iyo dhalinyarada wakhtiga dhalashada ilaa ay ka gaarayaan 18 sanno, waxayna taageertaa qorshayaasha bulshada degaanka iyo wax abuuritaanka cusub. Dhisayaasha Bulshada ­ website lagu wada xiriirayo oo dadka ka caawinaya inay wadaagaan macluumaadka ku saabsan mashruucyada bulshada oo hal abuurka leh iyo taageerada dawlada ee la heli karo. Gal www.communitybuilders.nsw.gov.au. Xoojinta Bulshooyinka ­ waxay gudbisaa mashruucyo badan ee meelaha hogaaminta bulshada iyo ka qayb galka, Masuuliyada Bulshada ee Shirkadaha iyo Daraasaadka cilmi baarista, oo looga danleeyahay kor u qaadida bulshooyin xoog leh. Istaraatijiyada NSW ee Yareynta Rabshada ka soo horjeeda Dumarka ­ waa istaraatijiyad dawladeed oo dhan si loo yareeyo oo adkeysiga rabshada dumarka iyadoo la isticmaalayo waxbarasho iyo istaraatijiyooyinka ka hortaga iyo iyadoo la hagaajinayo iskuxirka jawaabaha laga bixiyo rabshada wakaalada oo dhan. Qorshada Caawimaada Goobeed ­ wuxuu bixiyaa qiyaastii $10 milyan oo deeqo ah sannad kasta oo la siiyo ururada bulshada iyo golayaasha si loogu sameeyo mashruucyo xoojinaya bulshooyinka oo ka caawinaya dhisitaanka bulsho cadaalad iyo sinaan ba leh. Istaraatijiyada Dambiga iyo Xalka Bulshada ­ waxay bixisey $50 milyan muddo shan sanno ah oo ay ku bixisey 250 mashruuc in ka badan si ay u siiso jawaab hal abuur leh arimaha saameynaya bulshooyinka, gaar ahaan ka hortaga bulshada.
CAAWINTA DADKA AY WAXYEELEYSAY MASIIBOOYINKA DABIICIGA AH IYO KUWA KALE
Inta lagu jiro xaaladaha degdega ah sida dabka keymaha, daadaka, duufaanada waaweyn ama dhul gariirada, waxaan isku xirnaa adeegyada lamaanayaalkayaga bulshada sida Xarunta Ka soo kabsiga Salvation Army, Adra, Red Cross, Anglicare iyo St Vincent de Paul.
Waxaan siinaa ka nasasho isla markiiba ah iyo caawimaad si aan uga caawino in dadku ay dib ugu laabtaan noloshoodii caadiga ahayd sida ugu dhakhsaha badan. Tan waxaa ka mid noqon kara cunto, dhar, hoy iyo caawimaad lacageed oo isla markiiba ah. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa caawimaad lacageed oo wakhti dheer si loo caawiyo inay guryuhu ahaadaan kuwo kuwo la deganaan karo oo ammaan ah.
Masiibada ee Gobolka 8855 5111 ama wecitaan bilaash ah 1800 018 444
SIINTA ADEEGYO TAAGEERO SI LOO CAAWIYO DADKA GURIGA LA'
Barnaamijka Caawimaada Hoyga la Taageero wadajirka ah ee Dawlada Dhexe/ta Gobolka (SAAP), waxaan maamulnaa barnaamijka ugu balaaran ee dadka guriyaha la' ee Australia
SAAP waxay taageertaa dadka guri la'aanta ah ama khatarta ugu jira guri la'aan inay dib caadi ugu noqdaan. Waxaan qabanaa adeegyo badan anagoo marsiineyna wakaaladaha aan dawliga aheyn, oo ay ku jiraan hoyga, si dadka loogu caawiyo inay madax bannaanidooda dib ugu helaan. Waxaa jira 400 oo mashruuc oo ku saleysan bulshada oo ay SAAP leedahay NSW oo ka shaqeynaya inay taageeraan dadka dhalinyarada ah, raga kelida ah iyo dumarka iyo qoysaska, iyo sidoo kale dumarka iyo carruurta ka soo baxsanaya rabshada guriga.
Xarunta Macluumaadka Dadka guriga la' 9265 9639 ama wecitaan 9265 9081 bilaash ah 1800 234 566 Khadka Taleefanka Hoyga Degdega ah ee Dhalinyarada waa 9318 1531 ama wecitaan bilaash ah 1800 424 830 Iskaashatada Aborjuniiska ee Dadka Guri la'aanta ah ee Adeegyada Dhaqancelinta ee Bulshada 9799 8446
MAALGELINTA IYO SHARCIYEYNTA ADEEGYADA CARRUURTA SIDA DUGSIGA KA HOR IYO XANNAANO MAALMEEDKA
Waxaan hubinaa in la helo adeegyo carruureed badan si ay ugu haboonaadaan baahida qoysaska.
Kuwan waxaa ku jira Dugsiga ka hor, xannaano maalmeedka dheer, xannaanada dugsiga ka hor iyo ka dib, xannaano xiliyeedka iyo xannaanada fasaxa. Meelaha baadiya aha waxaan ka caawinaa in la sameeyo adeegyo carruureed guur guura oo ujeedooyin badan. Waxaan liisan siinaa adeegyada carruurta ee NSW, una dejinaa heerarka la rabo inay dhammaan adeegyada carruurtu inay ku shaqeeyaan. Waxaan sidoo kale maalgelinaa Adeega Gudbinta iyo Macluumaadka Qoyska iyo carruurta oo kaa siin kara macluumaad dheeraad ah adeegyada carruurta ee NSW oo dhan. Gal website kayaga www.community.nsw.gov.au wixii macluumaad ah ee ku saabsan doorashada xarun xannaano. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan adeegyada goobta aad degan tahay, waxaad ka helaysaa lambarada xiriirka xafiisyo goboleedka ee DoCS bogga ku xigga.
Adeega Gudbinta Macluumadka Qoyska iyo Xannaanada Carruurta 8594 4244 ama wecitaan bilaash ah 1800 803 820
Si aad u soo sheegto waxyeelo carruureed iyo dayacaad 24-kii saac maalintii, 7-da maalmood ee toddobaadka wac Khadka Caawimaada taleefanka ee 132 111
Xafiisyo Goboleedka DoCS Xafiiska Weyn Shantaraalka 9716 2222 (8:30 subaxnimo ­ 5.00 galabnimo)
4-6 Cavill Avenue 4-6 Cavill Avenue Ashfield 2131 Locked Bag 28 Ashfield NSW 1800 Locked Bag 4028 Ashfield NSW 2131
Fadlan ogow: waxa lagu galo dhammaan taleefanada buuggan yar waa 02 ilaa wax kale laguu sheego mooyee.
Metro Central Region Metro Central Region
Redfern Bankstown Redfern 8303 8303 7600 7600 9205 1500 9781 5555 9830 1000 9354 1800 9630 9830 1000 0199 4729 4722 7400 8200 4336 2401 4336 2401 4100 4944 4985 1666
Northern Region Northern Region
Ballina Ballina Mid-North Coast Mid-North Coast New England New England 6686 6686 1999 1999 6563 6563 7800 1440 6774 6738 8100 9800 4254 0309 4222 8400 9999 6298 6229 7202 6361 7006 6841 3250 6361 6990 9400 6937 6841 3240 6937 9400
Metro South West Region Metro South West Region Metro West Region
Bankstown Blacktown/ Metro West Region
Southern Region Southern Region Illawarra
Southern Highlands Illawarra Queanbeyan Western Region Central West Western Region Orana Far West Wagga Wagga Central West Orana Far West Wagga Wagga
Baulkham Hills Parramatta
Cumberland Baulkham Hills Blacktown/ Nepean Nepean
Hunter &amp; Central Coast Region Hunter &amp; Central CoastCentral Coast Region
Hunter Central Coast Hunter
Xarumaha Adeegyada Bulshada DoCS
Albury 6024 8700 6058 4900 Armidale 6774 8555 6738 8200 Auburn 9643 2377 9335 4100 Ballina 6686 6699 6686 1999 Bankstown 8713 7800 Bankstown 8713 7800 Batemans Bay 4472 4678 Batemans Bay 4472 4678 Bathurst 6331 9500 6333 0300 Bega 6492 3888 6499 0500 Blacktown 9830 1000 Blacktown 9830 1000 Bourke 6872 2188 6872 2188 Bowral 4861 1744 4861 0700 Brewarrina 6839 2482 Burwood 8372 9000 Broken Hill 08 8087 2844 Brewarrina 6839 2482 Burwood 8372 9000 Broken Hill (08) 8087 2844 Campbelltown 4621 5600 Campbelltown 4621 5600 Central Sydney 8303 7666 Campbelltown West 4621 5600 Cessnock 4993 5000 Cardiff 4953 5999 Charlestown 4985 1500 Cessnock 4990 1277 Chatswood 9406 9777 Charlestown 4943 8811 Clarence Valley 6641 2400 Chatswood 9406 9777 Cobar 6836 1360 Clarence Valley 6643 2526 (Grafton) Coffs Harbour 6659 1555 Cobar 6836 1360 Condobolin 6890 1100 Coffs Harbour 6659 1555 Cooma 6450 2888 Condobolin 6895 4133 Coonabarabran 6826 6000 Cooma 6450 2888 Coonamble 6827 1400 Cootamundra 6942 1555
Coonabarabran Coonamble Cootamundra Cowra Corrimal Dareton Cowra Deniliquin Dareton Dubbo Deniliquin Eastern Sydney Dubbo Edgeworth Eastern Epping Sydney Epping Fairfield Fairfield Glen Innes Glen Innes Gosford Gosford Goulburn Goulburn Griffith Griffith Hawkesbury Ingleburn Ingleburn Inverell Inverell Katoomba Katoomba Kempsey Kempsey Lakemba Lakemba Leeton Leeton Lismore Lismore Lithgow Lithgow Liverpool Liverpool Maitland Maitland Moree Mayfield Mount Moree Druitt Mudgee Mount Druitt
6842 2000 6822 2395 6942 1555 6341 1855 4285 3399 03 5019 8900 6341 1855 03 5882 2500 (03) 5027 4027 6884 5877 (03) 5881 1711 8303 7688 6884 5877 4958 0600 8303 7688 9815 0700 9815 0700 9205 6000 9205 6000 6732 4925 6732 4925 4336 2400 4336 2400 4828 5500 4828 5500 6961 8500 6961 8500 4574 6666 9829 2400 9765 6111 6721 0299 6728 2700 4782 3066 4782 3066 6562 1385 6562 1385 9704 7100 9704 7100 6953 3611 6953 9700 6621 8099 6623 4900 6351 4688 6351 4688 9602 8044 8778 3300 4933 6488 4939 4800 6750 7300 4974 3700 9625 7000 6750 7300 6372 8292 8887 7400
Muswellbrook 6543 2455 Narrabri 6792 4663 Newtown 8303 7666 Muswellbrook 6543 2455 Nowra 4422 1555 Narrabri 6790 6000 Nyngan 6832 1308 Nowra 4424 5100 Orange 6361 3299 Nyngan 6831 1000 Parkes 6862 1422 Orange 6361 6999 Parramatta 8855 4800 Parkes 6862 1422 Penrith 4731 6222 Parramatta 9354 1888 Port Macquarie 6583 3622 Penrith 4722 7300 Queanbeyan 6299 1111 Port Macquarie 6580 3700 Raymond Terrace 4987 1022 Queanbeyan 6229 7200 Richmond 4578 4744 Raymond Terrace 4987 1022 StGeorge George 9585 7222 St 9585 7222 StMarys Marys 9673 4777 St 9673 4777 Shellharbour 4255 6666 Shellharbour 4255 6666 Sutherland 9542 1111 Sutherland 8536 1111 Tamworth 6766 3735 Tamworth 6768 4600 Taree 6552 1577 Taree 6591 2100 Tumut 6947 4100 Tumut 6947 4100 Tweed Heads (07)07 5569 9330 5569 9330 Tweed Heads Ulladulla 4454 7744 Ulladulla 4454 7744 WaggaWagga Wagga 6937 9300 Wagga 6937 9300 Walgett 6828 1409 Walgett 6828 1409 Wilcannia (08)08 8091 5050 8091 5050 Wilcannia Wollongong 4254 0346 Wollongong 4222 8600 Wyong 4353 2855 Wyong 4352 6500 Yass 6118 6311 Yass 6226 7300
Adoption and Permanent Adoption Information Unit Care Services
Children's Violence Licensing and Regulatory Support line Domestic Services Line (24 hours) Disaster Recovery Centre Helpline (24 hour child protection service) Domestic Violence Line (24 hours) Hunter Foster Care Recruitment Team/Youth Support Team Foster Care Recruitment 9716 8855 4900, 1800 049 956 3002 or 1300 799 023 1800 1800113 463 619 656 8855 5111 or 1800 018 444 (9am-5pm) 132 111 1800 656 463 1800 4903 9555 2 Foster (1800 236 783)
Kings Cross Adolescent Service (KXAS) Helpline (24 hours) Metro South East Foster Care Team/Intensive Support Service Montrose Child Protection Unit State Disaster Recovery Centre (9am ­ 5pm)
8374 132 111 8022 9245 1741 9406 9777 8855 5111, 1800 018 444
Lambarada kale ee muhiimka ah iyo website yada
Aboriginal Corporation for Homeless and Rehabilitation Community Services 9799 8446 Alcohol and Drug Information Services (24 hours) 9361 8000 www.druginfo.nsw.gov.au Alcohol and Drug Information Services (24 hours) 9361 8000, 1800 422 599 Child Care and Family Information 8594 4244 or 1800 803 820 Child Care and Family Information 8594 4244 , 1800 803 820 Commission for Children and Young People 9286 7276 www.kids.nsw.gov.au Children's Employment 9025 4200 Department of Family and Community Services (Commonwealth) 1300 653 227 www.facs.gov.au Commission for Children and Young People 9286 7276 www.kids.nsw.gov.au Homeless Person's Information Centre 9265 9639 or 1800 234 566 Department of Family and Community Services (Commonwealth) 1300 653 227 Kids Help Line 1800 551 800 Family Support Services Association 9743 6565 Lifeline (24 hours) 131 114 Homeless Person's Information Centre 9265 9639 Office of the Children's Guardian 8219 3600 www.kidsguardian.nsw.gov.au Kids Help Line 1800 551 800 Parent Line (24 hours) 9787 0855 or 1300 1300 52 Lifeline (24 hours) 131 114 Translating and Interpreting Service 131 450 Office of the Children's Guardian 9025 4200 www.kidsguardian.nsw.gov.au Youth Emergency Accommodation Line (24 hours) 9318 1531 or 1800 424 830 Parent Help Line (Tresillian) 9787 0855, 1800 637 357 www.yaa.com.au Parent Line (Centacare) www.community.nsw.gov.au Translating and Interpreting Service www.communitybuilders.nsw.gov.au 20/10 Gay and Lesbian Youth Services (24 hours) www.youth.nsw.gov.au Youth Emergency Accommodation Line (24 hours) www.parenting.nsw.gov.au www.community.nsw.gov.au www.aboutdaterape.nsw.gov.au www.communitybuilders.nsw.gov.au www.cityofsydney.nsw.gov.au/Community/HomelessnessServices www.youth.nsw.gov.au www.parenting.nsw.gov.au www.familiesfirst.nsw.gov.au www.aboutdaterape.nsw.gov.au 132 055 131 450 9552 6130, 1800 652 010 9318 1531, 1800 424 830
Lambarada xiriirka degdega ah ee 24 saac waxay ku qoran yihiin gudaha jeldiga hore ee dhammaan buuggaga taleefanada.
Si aad uga soo warbixiso qof dhalinyaro ah ama ilmo khatar ugu jira waxyeelo ama dayacaad la xiriir Khadka Caawimaada DoCS 132 111 TTY 9633 7698 www.community.nsw.gov.au